ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ပကာသန ဇာတ်ပျက် အကြမ်းဖက် ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်နေပြီ
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 6:32 PM
Next 50 years waiting ahead.
လူးကို လူလုပ် လူကိုလူသတ် အော်ဒုက္ခဒုက္ဒ
Do you know what is the chemical weapon? what type and what size need to install in it.And Do they have any technologies to install them in the small diameter?
that right kyaw ning
thet tun said...
myo chit ဆိုတဲ့နာမည် က မင်းနဲ့ မတန် ဘူး။ နာမည် ပြောင်းလိုက်ပါ စွန်ကျစ် လို့ ။သခင် အားရ ကျွန်ပါးဝ ။စိန်သံလုံး ရေ ကျေးဇူးပါ ပဲ။တိုင်းပြည် မှာငပဲ့ တွေ အများကြီးရှိနေတယ်။
နေ့စွဲ ရက်စွဲတွေ လွဲနေတယ် ပြန်ပြင်ပေးစေ့ချင်ပါတယ်
oic ဆန့်ကျင်ပွဲတုန်းက မုံရွာက ဘုန်းဘုန်းတို့ ငြိမ်နေပြီး ကိုယ့်လူမျိုးချင်းကျတော့ ပြင်းထန်နေကြတယ် မေတ္တာသုတ် ကို ဘယ်လိုစိတ်နဲ့ ရွတ်ခဲ့တာလဲ လုပ်ရပ်နဲ့ လွဲနေသလိုဘဲ
oic အကွက်က ခွေးတွေခင်းတဲ့ ခွေးဇါတ်ကွ။အဲ့ဒါကို
ဟေ့ကောင် Myo Chit(မျိုးမစစ်)မင်းတို့ပြောနေတဲ့
တိုင်း အရူးချေးပန်းလုပ်ထားတာကြီးကို ဘယ်ပြည်သူက
မှ တာဝန်ခံစရာမလိုဘူးကွ။အဲ့ဒီ ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ ဘယ်အပိုဒ်
ကများ ပြည်သှူဆီက ဆင်းသက်လာသလဲ။ဖြေ....
မဆလက ဘိန်းဘုရင်တွေကို မျက်နှာသာ မပေးခဲ့ဘူးဆိုတာ မမှန်ဘူးဗျ။ လော်စစ်ဟန်ကို စပြီးမွေးခဲ့တာ၊ စင်တင်ပေးခဲ့တာ နေဝင်းပါ။ လော်စစ်ဟန်ဘိန်းဘုရင်က အမေရိကန် အောက်လွှတ်တော် အမတ်တချို့ကို နားပေါက်အောင် ပြောနိုင်ခဲ့လို့ အမေရိကန် မြန်မာ ဆက်ဆံရေး ပွဲစားလုပ်ပေးဖို့ လော်စစ်ဟန်ကို နေဝင်းက စမွေးခဲ့တာပါ။ နဝတ၊ နအဖ ဆိုတာ နေဝင်းစစ်အစိုးရပါပဲ။ သိန်းစိန် ကြံ့ဖွံ့ဆိုတာလည်း နဝတ၊နအဖပါပဲ။
if you don't see my offensive vulgar curse ,
i want you to ban the name (ct) here in comments.
that motherfucker is one of those disgusting fucking
i understand everyone has their own freedom of expression but i do not want to see counter-attack(comments) from those motherfuckers.
အဲဒါဆို လည်း ၈၈ တုံးကလိုဖြစ်အောင်ရဲတွေကိုအကုန်
ထွက်ခိုင်းလိုက်လေ လူမိုက်တွေကတွေ့ရာလူကိုခေါင်းဖြတ် ပြီးတရားစီရင်လိမ့်